Xaalada Jawiga Muqdisho oo Isbadalay, Ciidamada oo heegan ku jira & Gaadiid Qaraxyo Wado oo la baarayo - Hablaha Media Network
Xaalada Jawiga Muqdisho oo Isbadalay, Ciidamada oo heegan ku jira & Gaadiid Qaraxyo Wado oo la baarayo
HMN:- Warar goordhow kusoo dhacay Warqabkeena magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya iney socdaan howlgallo xoogan oo lagu baadi goobayo gaadiid loo diyaariyay iney qaraxyo ka fuliyaan Muqdisho.
Holwgalkan oo ay fulinayaan ciidamada gaarka ah ee dowladda ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen in gudaha magaaladda lasoo geliyay gaadiid ay wadaan dad isqarxinaya oo doonaya iney qaraxyo fuliyaan.
Saraakiil katirsan dowladda ayaa sheegay iney jiraan weeraro ay kooxda Al-Shabaab qorsheynayaan iney geystaan saacadaha soo socda.
Meelaha sida weyn ciidamada ay ubaarayaan waxaa kamid ah goobaha ay dadka isugu yimaadaan sida Xeebta Liido Maqaayadaha ku yaal, Hotel Jazeera, Hotel SYL iyo Afaafka Dekadda Muqdisho.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in ku dhawaad 10 gaadiid oo qaraxyo ah iyo rag fuliya weeraro toos ah ay Shabaab usoo direen magaaldda Muqdisho.
Waxaa jirta cabsi ah in gaadiidka la baarayo ay ku jiraan kuwa dad weynaha iyo kuwa waa weyn ee ka shaqeeya dekadda Muqdisho.
Sidoo kale amaanka xarumaha QM iyo Safaaradaha magaaladda Muqdisho ayaa aad loo adkeeyay iyadoo laga cabsi qabo in weeraro ay ka dhacaan.
Shacabka magaaladda Muqdisho ayaa aad uga wal walsan in dhibaato ay kasoo gaarto weerarada ay maleegayaan kooxda AlShabaab.
ALShabaab ayaa marar badan dad shacab ah ku laayay qaraxyo iyo weeraro ay geysteen, waxaana xiliga bisha Ramadaan ay sameyn jireen weerarada ugu badan.